शब्दकोश: हाम्रो आउनु र जानुहरू
यस्तो लाग्छ, आउनुसँगै त्यसको गर्भमा जानुको पनि भ्रुण रोपिएर आएको हुन्छ । अर्थात् जहाँ आगमन हुन्छ, त्यहाँ त्यही आगमन अन्ततः प्रस्थान पनि बन्छ । कुरै गर्दा मात्र पनि कति अत्यास लाग्छ, यथार्थ तर यही हो । यति फरक हो- आँखा त हामीसँग उही नै एकजोडा रहिरहन्छन्, तर कसैको आगमनमा ती उमङ्गले डबडबाउँछन् भने प्रस्थानमा पीरले पिलपिलाउँछन् । र, यस्तोमा हामी आँखालाई मद्दत गर्नुबाहेक गर्न नै के पो सक्छौँ र ?
'भोलि रसियन कल्चरल सेन्टरमा प्रोग्राम छ ४ बजे, तपाईँको निम्तो मसँग छ आउनु है !', अप्रिल २१ सोमबारको अपराहृन मोबाइलको एसएमएसमा बुरुरु अक्षरहरू छरिए । पढेँ, साथी 'समृद्घि सायद'को रहेछ । शुभारम्भ : द म्युजिकल जर्नीको कार्यक्रम रहेछ । एउटै राजधानी खाल्डोभित्र रहेर पनि जोसँग अहिलेसम्म भेटघाटको घुम्टीखोली भएको छैन । कार्यक्रमको रमाइलो बहानासँगै साथी-साथीमा पहिलो भेट हुन पाउने कुराले मन मुस्कुरायो । त्यो भोलि कतिबेला आउला भनेझैँ आतुरताको एक झिल्कोले दुःख दिइरहृयो । कारण, परिचयको सुरुवाती समयदेखि नै उनी मेरो सिर्जनात्मक यात्रा तथा व्यक्तिगत कथाव्यथाका कुरामा कसोकसो एक शुभचिन्तकका रुपमा आत्मीय भएर उभिएकी थिइन् । यस्तो शुभचिन्तकसँग भेट हुन पाउने कुरामा उत्सुक नहुने कुरै थिएन । यो भेट उनीसँग म पहिल्यै गर्न चाहन्थेँ । तर कहिले उनको जागिरे दैनिकीको धपेडी र कहिले बिरामी बाबाको सेवाटहलमा उनको व्यस्तता र पिरलो देखेर भेट्ने कुरो छायामै पार्नु परेको थियो ।
हङकङबाट सञ्चालित एउटा वेबसाइटमा मेरो पत्रात्मक कथा पढेपछि 'मेरो लागि लेखेको हो कि क्या हो ------' भनेर इमेलमार्फत जिस्काउँदै पहिलोपटक सम्पर्कमा जोडिएकी एउटी अञ्जान केटीसँग त्यसयता पछिल्ला दिनहरूमा उसका फोनवार्ताले म विशेष प्रभावित हुँदै आएको थिएँ । उनै समृद्धिले मलाई जीवनकै पहिलो रेडियो अन्तर्वार्ताको मौका जुटाइदिइन्, जसका दूरगामी गहिरा कुराहरूबाट हुँडलिएर बल्ल म २० वर्षछिको लागि सोच्दै सोखको 'कवि-जीवन'बाट कर्तव्यको 'कर्मचारी-जीवन'मा घुस्रिन लोकसेवा आयोगको पढाइतिर मोडिएको थिएँ । उनको फोन आइरहन्थ्यो र म ढुक्क भई साथीसँगै सहोदर एउटी दिदीबहिनीसमानको स्नेहबुटी पाएर पुलपुलिँदै थिएँ । उनी कहिले मेरो प्रेमिका-प्रसङ्ग निकाल्दै 'अरुतिर आँखा दौडाए प्यारीको हातबाट टाउकोमा धार्नीको आलु फल्ला है' भनेर खिलखिलाहट बाँड्ने गर्थिन् । यस्तो आत्मीय अनुहारको दर्शन गर्नलाई बल्ल साइत जुर्न लागेको थियो, एउटा कार्यक्रमको मध्यस्थतामा ।
भोलि अपराहृनको ४ बजे भेट्ने टुङ्गोलाई जप्दै बेलुका निदाएको म ४ बजे त के बिहान सबेरै ३ बजे नै उठ्नुपर्‍यो । सुक्खा मौसमको बदलिँदो रङले ममा होली नखेली रहन सकेन, मलाई बिरामी बनाएरै चराहरू उठ्नुअगावै उठायो । गाउँको झाडापखालाले यता सहरमा 'डाइरिया' भएर मलाई निचोर्‍यो । डेढ वर्षपछि त्यस्तरी फेरि बिसन्चोले म बिछ्यौनाको अडेसामा ढलेको थिएँ । केही हप्तायता बीचबीचमा हल्काफुल्का अस्वस्थताले शरीरलाई मर्मत गर्दै थियो, यस्तरी थला पार्नलाई नै त्यो पर्ूवतयारी रहेछ सायद । कुनै भक्तप्रसादले तन्मय भएर बेलाबेला मन्दिरको परिक्रमा गरेजस्तै छिनछिनमा म चक्करमा निस्किन थालेँ- बाथरुमको भूगोलमा । भरेसम्ममा त बिस्तारै ठीक होला र कार्यक्रममा जाउँला, तब प्यारी साथीसँग उद्घाटन भेट गरुँला सोचेर आफूलाई ढाडस दिइरहेँ । यसैले आउनको लागि अर्समर्थ भएँ भनेर झ्वाट्ट खबर गर्न पनि सकिनँ, पुग्छु भन्ने आस लागिरहृयो । नक्सालबाट कमलपोखरीको रुसी केन्द्र टाढाको कुरा पनि थिएन ।
घन्टैपिच्छे घडीका सुइराहरूले अब त निको हुनुपर्छ भनेर मलाई झस्काइरहृयो । बिहानको समय पार भयो, मध्याहृन आइपुग्यो, यस्तैगरी दिवासमयले तालु सेक्न थाल्यो । तर झन् झन् हालत खराब पो हुन थाल्यो । टोलको रैथाने अल्लारे आँखाले नवागन्तुक किशोरीलाई घुरेर पिछा गरेजस्तै म बिसन्चोको निशानामा परिरहेँ । यस्तैमा ४ बज्यो, अब आस मार्नुभन्दा विकल्प थिएन, तर यतिखेर आउँदिनँ भन्नलाई लाज र डरका युगल जालोले मलाई छोप्यो । म कुच्रुक्क परेर सुतिरहेथेँ । सवा चारतिर उनै समृद्धि नानीको खबरदारी फोन आयो, उठाउनेबित्तिकै बोल्ने तागत झिक्दै 'माफ गर्नु है आउन सकिनँ' भनेर भरोसाको आधार खोजेँ । उताबाट 'नआएको ? किन ?' भन्ने दिक्किएको स्वर बज्यो । पृष्ठभूमिमा कार्यक्रम चल्दै गरेको आवाज सुनिँदै थियो, प्रकाश सायमीको बोली घुस्यो ।
बिहानैदेखि बिसन्चोले थिलथिलिएको म निम्तो मान्न जान नपाएकोमा थप दिक्क छँदै थिएँ, भनेँ- अहँ आउन सकिनँ । साथीले 'ल त्यसो भए मैले कुरा गरिनँ है' भनेर झ्वाट्ट फोन राखिन् । साथीको चित्त दुखाइ र मायालु रिस प्रस्टै थाहा पाएँ । पहिलोपल्ट त्यति महत्व दिएर बोलाउँदा मैले नगएर खासमा उनको अपेक्षाको अवहेलना गरेको थिएँ । बिरामी हुनु विज्ञापन गर्ने कुरा पनि होइन भन्ने मलाई सधैँ लागिरहन्छ, यसैले यसपाली पनि पीडाको पिरामिड आफूमै उभ्याएर चुपचाप बसिरहेँ । आउन नसक्नुको स्पस्टीकरण दिएर बुझाउन नसकेकाले उनलाई कति नमीठो अनुभूति भयो होला, म पारख गर्दै थिएँ । तर धेरै कमजोरी भएर कामज्वरोसमेत छुटिरहेको कारण म सिरकभित्र निसासिएर आफ्नो हालत हेर्नमै सीमित हुन बाध्य भइरहेँ ।
बेलुका ज्वरो उत्रिएपछि साथीको उही बोली कानभरि गुन्जिएर आइरहृयो- 'ल त्यसो भए मैले कुरा गरिनँ है !' मन कताकता पिरोलिइरहृयो, आफ्नो कारणले कसैको मन दुख्नु र साथी रिसाउनु मेरो लागि सहृय कहिल्यै हुँदैन, छटपटिइहाल्छु अत्यासले । साथी समृद्धिबाट म फिर्ता भएको हो ? सोचिरहेँ । त्यो स्नेहसँग त्यति गहिरिएर घुलेको म फिर्ता भएर निस्किन सक्छु ? यतियतिमै त्यो आउनु अब जानुमा रुपान्तरित भइहाल्ने हो कि ? आत्मीयताको बिजोगले डर लाग्यो ।
लाग्यो, असम्भव केही छैन दुनियाँमा । केवल आशय गलत पर्दा भने थकथकी हुन्छ मन । उसै पनि यो समय थकथकीकै त हो । समृद्धिजी, मिल्छ भने हिजोदेखि आजसम्मको सबैसबै घटनाहरूको लागि क्षमा दिनुस् है । तर यो क्षमाको माने केही कुरा बिराएर म तपाईँसामु लज्जित भने कुनै विन्दुमा छैन । यद्यपि मेरो अनुभवमा केलाउँदा विगतको हाम्रो मैत्री पलहरूमा सहृदयताको प्रतिशत कता हो कता ज्यादा रहृयो । तर तपाईँको असीमित आत्मीयताको अघि मेरो धोकाको मात्राले बढ्तै बठ्याइँ देखायो होला । सायद मेरो मैत्री योग्यता समान कदमा उभिन सकेन तपाईँसँग । तपाईँबाट यदि म फिर्ता भएको भए जान्छु आफ्नै जानुसँगै । तपाईँको मन दुखाउने सेरोफेरोमा अब मेरो चालचुल कत्ति पनि रहने छैन । ढुक्क हुनुस् । पुनश्चः क्षमा ।
अप्रिल २३, २००८ (नक्साल)